“Barcelona, Juventus & Real Madrid waa sida caruur ka tagtay iskuulka oo kale haddana ka carootay inaan lagu casuumin xaflad dhalasho sidaasna ugu dacwooday booliska” – Ceferin - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 12, 2021 at 10:11 “Barcelona, Juventus & Real Madrid waa sida caruur ka tagtay iskuulka oo kale haddana ka carootay inaan lagu casuumin xaflad dhalasho sidaasna ugu dacwooday booliska” – Ceferin2021-06-12T10:11:00+02:00 CAYAARAHA
(Yurub) 12 Juun 2021. Maxaxweynaha xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee Aleksander Ceferin ayaa saddex ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ku tilmaamay caruur aanan looga yeerin xaflad dhalasho kaddibna la xiriiray booliska.
Madaxweynaha UEFA ayaa wali dagaal la xiriira mashruuca European Super League kula jira kooxaha Barcelona, Real Madrid iyo Juventus kuwaasoo wali baaqi ku ah go’aankii ay ku bilaabeen Super League inkastoo haatan Guddiga Dacwadaha UEFA ay joojiyeen dacwadii ka dhanka ahayd saddexda naadi.
Ceferin ayaa weerar ku qaaday Barca, Madrid iyo Juve isagoo la hadlayay Rai Sports kahor inta aysan bilaaban ciyaartii furitaanka Euro 2020 ee xalay ka dhacday magaalada Rome ee dalka Taliyaaniga.
“Waxaan kaliya leeyahay caddaaladda marmarka qaar way soo raagi kartaa, balse ugu dambeyn we imaaneysaa, wali ma aanan helin kiis anshax balse sida aan arko ma ahan xaalad qeexan” ayuu yiri Aleksander Ceferin.
“Ugu horreyn, waxaan kala caddeyn doonaa waxyaabaha sharciga ah kaddibna weynu sii dhaqaaqeynaa.
“Marmarka qaar waxaan dareemaa inay saddexaad naadi (Real Madrid, Barcelona iyo Juventus) ay yihiin sida caruur ka tagtay iskuulka muddo oo aanan lagu casuumin xaflad dhalasho kaddibna isku dayay inay booliska la xiriiraan.” ayuu yiri Madaxweynaha UEFA.
Dhinaca kale, Ceferin ayaa ka jawaabay ereyadii uu madaxweynihii hore ee UEFA, Michel Platini ku sheegay inay kooxuhu xaq u leeyihiin inay aas-aasi karaan tartan barbar socda tartammada kooxaha Yurub, waxaana uu Madaxweynaha haatan UEFA maamula uu sheegay inaysan la yaab la ahayn waxa uu Platini sheegay sidoo kalena aysan mudneyn in laga aragti dhiibto.
« Ciidamada Xoogga dalka oo fashiliyey qaraxyo iyo wararkii ugu dambeeyey
TENNIS: Novak Djokovic oo cashar u dhigay Rafael Nadal »